परस्त्रीसँग फक्रिएको प्रेम सम्बन्ध !| Janachaso Khabar
म प्रति उनको यति धेरै आकर्षण किन ! म जहिले नै द्विविधामा पर्ने गर्दछु । मसँग कुरा गर्न र बोल्न पाउँदा संसार नै रमाइलो लाग्छ रे उनलाई ! मैले बुझ्न सकेको छैन ! आफ्नो श्रीमानबाट पो उनले अथाह मायाको अपेक्षा राख्नुपर्ने हो ? म त परपुरुष न हो, मैलै कसरी उनलाई यति धेरै माया दिनसक्छु । सामिप्यता, भेटघाट र शारीरिक मिलनमा हामी चाहे अनुसार नजिक पनि त हुन सक्दैनौँ । सामाजिक सञ्जालले जुराएको हाम्रो भेट र सो पश्चात भएका कुराकानी यसरी मायाको बेगमा परिणत हुन्छन् भन्ने त मैले कल्पना पनि गरेको थिएन। आफ्नो श्रीमानले दिने माया पो गहिरो होला सोच्ने गर्थे, तर म भ्रममा रहेछु । सामाजिक सञ्जालमा भएका कुराकानीबाट फक्रिएको प्रेम पो उनका लागि गहिरो हुन पुग्यो ! श्रीमानको प्रेम त गौण पो रहेछ । श्रीमानबाट उनले पाएको प्रेमले भावनात्मक रुपमा खुशी र प्रेमरस पाउन नसक्ने रहिछन् ।
बिहान उठ्ने वित्तिक्कै मोबाइलमा नजर गयो। फेसबुक खोल्छु, नयाँ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आएको देखे। कौतुहलता भयो। प्रोफाइल हेर्न मन लाग्यो। प्रोफाइल पिक्चर हेरे, अत्यन्तै आकर्षक शरीर, रातो सारी, अर्धकट्टी बलाउज, लामो कपाल, रसिलो ओठ अनि गोरो अनुहार त्यसैमाथि कालो चश्मा । शारीरिक बनावट हेर्दा उमेर ३०-३५ हुनसक्छ भन्ने अनुमान लगाए। नारी त साच्चै सौन्दर्यकी खानी हुने रहिछन् भन्ने थप पुष्ट्याई भयो । मेरा औँलाहरु रिक्वेस्ट Conform गर्न आतुर भए । रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरेको केहि मिनेटमै उताबाट मेसेज आउँछ, HI…! मैले नि Hello भने, कुराकानीको सुरुवात भयो ! ।घर, ठेगाना, पेशा, व्यवसाय लगायतका सन्दर्भमा प्रश्नोत्तर हुँदै गयो । कुराकानी अगाडि बढ्दै गयो । म मोबाइलमा News Feed हरु समेत हेर्न थालेकोले रिप्लाई ढिलो हुने गर्दथ्यो । उनले मलाई चाँडो रिप्लाई गर्न अनुरोध गरिन्। मैले मनोविज्ञान बुझिसके, उनले मलाई विशेष महत्व दिएर कुरागर्न खोजिरहेकी छिन् । मलाई पनि कौतुहलता भयो, भर्खरै साथी भएको मान्छे ! मसँग कुरा गर्न किन लालायित छिन् ?
मैले पनि उनको अनुरोधलाई सहज रुपमा लिई निरन्तर कुराकानी अगाडि बढाए । सामान्य रुपमा अगाडि बढेको कुराकानी विस्तारै निजी जीवनमा समेत प्रवेश गर्न थाल्यो । कुराकानी हुँदै जाँदा उताबाट मेसेज आयो, जसले मलाई सोचमग्न बनायो । हजुर धेरै Handsome हुनुहुन्छ ! मलाई मन परयो। हामी असल साथी बन्न सक्छौ ? मैले प्रतिप्रश्न गरे, म मा के देख्नु भयो र त्यस्तो ? “हजुरको Getup, पहिरन, स्माइल र Simplicity साह्रै राम्रो छ !” तपाईले मेरो झुठो तारिफ गर्नुभयो ! Anyway Thank you भने। फेरी उनले अनुरोध गरिन, हामी असल साथी बन्न सक्छौ? असल साथी बन्नु त कुनै नराम्रो कुरा होइन । फेसबुकमा रिक्वेष्ट एक्सेप्ट गर्ने वितिक्कै त हामी साथी भैसकेको थियौँ। असल साथी बन्न त झन के गारो भयो र ? भनेर जवाफ फर्काए । Thank you So much भनिन् । थोरै घरायसी काम गर्नु छ, अहिलेलाई Bye c u Soon भनेर मेसेज गरिन् । त्यो दिनको लागि हाम्रो कुराकानी त्यतिमै सकियो ।
दिनहरु बित्दै गए। मसँगको वार्तालापलाई उनले Close बनाउँदै लगिन र मेरो पनि समर्थन रहँदै गयो। मेसेन्जर च्याट हुँदै, कहिलेकाँही कल पनि हुन थाल्यो । अब त उनलाई मेरो बोली सुन्ने बानी परयो रे । नसुनी त बस्नै नसक्ने भइन् । बोली र लवजको प्रशंसा गर्न थालिन् । मलाई पनि कता कता उनको सौन्दर्यता र परिपक्वता अनि शारीरिक आकर्षणले तान्न थाल्यो । दोहोरो आकर्षणले कुराकानीमा झनै बढोत्तरी हुँदै गयो । आत्मियता बढ्दै गयो । प्रकृतिको अनौठो लिला। विपरित लिंगी प्रतिको प्रेम र उक्त प्रेमले पैदा गर्ने भावनात्मक उमंग, खुशी अनि उर्जा । प्रेममा शक्ति र उर्जा हुन्छ् भन्ने कुराहरु थप पुष्ट्याई भइरहेका थिए । मसँग बोल्न पाउँदा र मेरो बोली सुन्न पाउँदा उनलाई अलग्गै उर्जा र उमंग छाउन थाल्यो । संसार रमाइलो लाग्न थाल्यो । मलाई पनि उमंग र उर्जाले छाउन थाल्यो । बोल्न नपाउँदा छटपटी हुने, चारैतर्फ अध्याँरो लाग्ने, निराश हुने भन्ने पीडा र मर्म समेत बिसाउन थालिन् । माया प्रेममा त्यति धेरै चासो नराख्ने मान्छे भएर उहाँका कुराहरुले मलाई पटक पटक सोच्न बाध्य बनाउँथ्यो । उनको लागि म यति महत्वपूर्ण कसरी भए ! म प्रति उनको यति आकर्षण अनि लगाब किन बढ्यो ? हुँदा हुँदा त म उनको खुशीको बहार नै बन्न थालिसकेको रहेछु ।
समयको गतिक्रमसँगै दिनहरु बित्दै गए । कुराकानी गहिरो हुँदै गयो । हाँसो मजाक, ठट्टा पनि पटक पटक हुँदै गए । अन्तरअंग कुराकानीतर्फ पनि उनको लगाब बढेको महसुस हुन थाल्यो। कैयन वार्तालापहरुभित्र यौनका आशयहरु लुकेका हुन्थे । सम्बन्धमा घनिष्ठता बढ्दै गयो । ठट्यौली पारामा हुने कैयन कुराहरु भित्र यौनिकता समेत लुकेका हुन्थे । यौनिकता जोडिएर हुने अन्तरअंग कुराकानीले परस्त्रीसँगको प्रेम उच्चतम विन्दुमा पुग्न लागेको आभास हुन थाल्यो । यति धेरै कुराकानी हुँदासम्म मैले उनको दाम्पत्य जीवनको बारेमा सोधेको थिएन । अब त मैले नसोधि बस्न सकेन । मैले प्रश्न गरे ? हजुरको दाम्पत्य सम्बन्धको बारेमा केही जानकारी पाउन सकिन्छ ? उहाँले शुरुमा भन्न अप्ठ्यारो मानेपनि पछि भन्न बाध्य भईन र बेलिविस्तार लगाईन् । भन्दै गइन् “विवाह भएको २ बर्षसम्म मात्र हामी श्रीमान श्रीमति सँगै बस्यौ, दुवैको शारीरिक सम्बन्धबाट एउटा छोरीको जायजन्म भयो। त्यसपछि वहाँको चाल चलन फेरिन थाल्यो, बाहिर अन्तै केटिसँग श्रीमानले सम्बन्ध राख्न थाल्नु भयो ! अनेकन केटिहरुसँग उहाँको शारीरिक सम्बन्ध हुन थाल्यो ! वहाँको सम्बन्धका बारेमा बाहिर हुने चर्चाले मलाई पीडाबोध हुन्थ्यो। २ पटक त परस्त्रीसँको अंगालोमा बाँधिएको मेरै आँखाले देख्यो, उनीप्रतिको मेरो सारा बिश्वास अनि माया क्षणभरमै बिलायो ।उनी अहिले घरमा पनि खासै बस्दैनन् । ४/५ महिनामा १ पटक मात्र घरमा आउने गर्छन्। हामीबीच शारीरिक सम्बन्ध नभएको ५/६ बर्ष भैसक्यो ! म पनि त मानव हो ! मलाई पनि माया चाहिन्छ, मलाई पनि शारीरिक भोग र आवश्यक्ता हुन्छ। ” म धेरै बोल्न सकिन्। मलाई उनलाई स्वान्तना दिँदै सम्झाए ।
उनको म प्रतिको माया र विश्वास गहिरो रुपमा फक्रिसकेको थियो ।म प्रतिको भावानात्मक आकर्षण मात्र नभएर शारीरिक आकर्षण पनि त्यतिकै बढेको आभाष हुने गर्थ्यो । विभिन्न समयमा हुने कुराकानीमा समेत माया प्रेमका साथै यौनिकता र अन्तरअंग कुराकानी पनि हुने गर्थे । पटक पटकको कुराकानीमा समेत शारीरिक भोग र यौन तिष्णा मेट्ने आशय लुकेका हुन्थे । मैले आशय बुझिसकेको थिए । मबाट उनले अझै धेरै माया पाउन खोजिरहेकी थिइन् । सोझै भन्न त सकिनन् । तर पटक पटक उनको चाहना अलि बिशिष्ट र फरक हुन्थ्यो । उनी म प्रति मन्त्रमुग्ध भएकी थिईन् । पुरै शरीर नै सुम्पिने अभिव्यक्ति आउने गर्थे । समग्रमा उनको आशय मैले बुझिसकेको थिए । उनले आफ्नो शारीरिक भोग र तिष्णा समेत मेटाउने गरी मसँग भेट गर्न चाहिन् । म निशब्द भए । केही प्रतिक्रिया दिन सकेन् ।
मैले भने म बिवाहित पुरुष हो । पवित्र वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएको छु । हामी त विवाह बन्धनमा मात्रै बाँधिएका छैनौ, विश्वासको डोरीले समेत बाँधिएका छौँ। विश्वासको डोरी चुँडाल्न मेरो मनले मान्दैन्। आत्मिय र पवित्र सम्बन्धमा बाँधिसकेपछि श्रीमान श्रीमतीले गर्ने हरेक क्रियाकलापमा पारदर्शिता हुनुपर्छ । एकअर्कालाई जानकारी हुनुपर्छ। भित्र आदर्शका कुरा गरी बाहिर छुरा प्रहार गर्ने काम राम्रो हुन सक्दैन । जुन कुराले हाम्रो दाम्पत्य सम्बन्धमा धोका हुन्छ । त्यो कुरा गर्नु हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ । मैले हजुरको पीडा बुझेको छु, तर मलाई माफ गर्नुहोला म हजुरको इच्छा पुरा गर्न असमर्थ छु । असल साथी बन्ने कुराबाट हाम्रो मित्रता शुरु भएको हो । अझैपनि हामी असल साथी नै बन्नुपर्छ । त्यो भन्दा माथि जानु हुन्न । हाम्रो समाज यो मामिलामा अझै खुलिसकेको छैन । हाम्रो समाजको प्रथा, परम्परा र प्रचलनले समेत यो कुरालाई स्वीकार गर्न सक्दैन् । यति भन्दै मैले उनीसँग माफि मागे ! उनले मेरो विचार र प्रवृत्तिको उच्च प्रशंसा गर्दै धन्यवाद अर्पण गरिन् र पवित्र सम्बन्ध कायम गरी असल साथी बन्ने प्रतिक्रिया दिईन् ।
यति पढ्दै गर्दा कतिपयलाई लाग्ला कि, यी माथिका प्रसंगहरु मेरो निजी जीवनका सत्य घट्ना हुन भनेर। तर माथि विवेचित प्रसंगहरु सबै काल्पनिक हुन्। मैले समकालिन परिस्थिति र समाजको यथार्थ चित्रण गर्ने प्रयास गरेको छु । विवाह पश्चातका कतिपय दाम्पत्य सम्बन्धहरुमा दरार पैदा भएको पाउन सकिन्छ । सुन्दर परिवार पनि छिन्नभिन्न भएका छन् । बिशेष गरी यौनका मामिलामा परपुरुष र परसस्त्रीसँको आकर्षण र शारीरिक सम्बन्धले जटिलता ल्याउने गरेको छ । बाहिर सम्बन्धमा रहेका पुरुष वा महिलाको घरमा आत्मिय सम्बन्ध रहन सक्दैन् । विश्वासको खडेरी देखा पर्दछ भन्ने एउटाले बाहिर सम्बन्ध राख्दा अर्कोले पनि बाहिर सम्बन्ध राख्न बाध्य हुने अवस्था आउन सक्छ । हाम्रो समाजको परम्परा, प्रचलन र प्रथाले समेत परपुरुष, परस्त्री सम्बन्ध र विवाहपूर्वको यौन सम्बन्धलाई बर्जित गरेको छ । यस्ता सम्बन्धमा रहेका व्यक्तिहरुलाई हाम्रो समाजले कहिल्यै राम्रो नजरले हेर्दैन। समाजको नजरमा उ जहिले नि चरित्रहिन देखिन्छ । तसर्थ यौन स्वतन्त्रताका नाममा विदेशी प्रवृत्ति र प्रचलनका उदाहरण देखाएर समाजमा यौन विकृति ननिम्त्याउँ । अनुशासन, मर्यादा र प्रतिष्ठा कायम गरौँ । समाजलाई सभ्य र सन्तुलित बनाउँ । पारीवारिक समधुरता, आत्मियता र सच्चरित्रता कायम गरौँ ।
-लेखक नेपाल सरकारका कानून अधिकृत हुन्।
E-mail: janachas[email protected]